Tatitra vaovao: Manimba ny vondrom-piarahamonina mpanjono asa tanana sy ny zavamananaina an-dranomasina ny trawling ambany - Blue Ventures
Desambra 9, 2021
Maherin'ny 99 isan-jaton'ny trawl eran-tany no mitranga ao anatin'ny Faritra Ara-toekarena Exclusive any amin'ireo firenena amoron-tsiraka izay mety hampidi-doza ho an'ny toeram-ponenana manakiana sy ireo mpanjono mpanao asa tanana madinika, hoy ny tatitra vaovao.
Ny tatitra, nosoratan'ny manam-pahaizana avy amin'ny Blue Ventures, CEA Consulting, Duke University, Fauna sy Flora International ary ny ranomasina manodidina antsika dia namaritra an'i Shina, Vietnam, Indonezia, India ary Maraoka ho firenena dimy ambony indrindra mpitrandraka trawling raha refesina amin'ny salan'isa azony (2007- 2016), miaraka amin'ny laharana UK ao amin'ny 20 ambony miaraka amin'i Etazonia sy Nouvelle Zélande.
Ny sambo misy sainam-pirenena vahiny dia mitentina 90 isan-jaton'ny trondro rehetra nampidinin'ny mpitaingina an-tanety tany amin'ny firenena 34 amoron-tsiraka, miaraka amin'ny ankamaroan'ny sambo avy any Azia na Eoropeana, ary ny ankamaroan'ny trawl dia mifantoka ao anatin'ny 12 kilaometatra monja amin'ny morontsiraka. Miasa matetika any amin'ny fari-dranomasin'i Afrika sy Oseania ireo tra-boina ireo, saingy noho ny tsy fahombiazan'ny fitantanana ny jono sy ny fampiharana ny fitondrana any amin'ny faritra sasany, dia azo inoana fa lehibe kokoa noho ny soso-kevitry ny tarehimarika misy ny fiantraikan'izany.
Ny voka-pikarohana amin'ity asa ity dia mampandroso ny fahatakarantsika ny fiantraikan'ny trawling ambany eo amin'ny toeram-ponenan'ny morontsiraka sy ny jono madinika. “Maherin'ny 100 tapitrisa ny olona miantehitra amin'ny fivelomana sy fanjonoana madinika ho an'ny sakafony sy ny fivelomany isan'andro − matetika mampiasa ny rano lasibatry ny sambo mpitatitra any ambany. Amin'ny fiatraikany amin'ny toeram-ponenana sarotra sy ny isan'ny trondro, ny trawling ambany dia mety hiteraka fifandirana sy hampihenana ny jono izay manakiana ny fivelomana sy ny fanjarian-tsakafo ho an'ny sasany amin'ireo olona marefo indrindra eto an-tany” hoy ny Dr Steve Rocliffe, mpahay siansa an-dranomasina ao amin'ny Blue Ventures.
Ny tatitra ihany koa dia manasongadina ny fandraisan'anjaran'ny trawling ambany amin'ny famoahana entona mandatsa-dranomaso amin'ny alàlan'ny fampiasana solika avo lenta sy ny fikorontanan'ny sediment misy karbaona. Ny dian'ny karbônina amin'ny hazan-dranomasina trawl ambany avy amin'ny fampiasana solika fotsiny dia anisan'ny ambony indrindra amin'ny sakafo rehetra ary efa ho avo telo heny noho ny jono hafa tsy trawl.
Tsy mbola nitombo ny filana hamahana ireo fiantraikany ireo. Ny famoahana ny tatitra dia tonga fotoana fohy taorian'ny nanombohan'ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana Taona iraisam-pirenena momba ny jono sy ny fiompiana trondro (IYAFA 2022), izay mikendry ny hamantatra ireo mpanjono mpanao asa tanana madinika, mpiompy trondro ary mpiasa trondro ary ny fandraisany anjara amin'ny fampandrosoana maharitra, ny fanjarian-tsakafo, ny fivelomana, ny sakafo ary ny famongorana ny fahantrana.
Amin'ny maha-mpiahy ny harena iombonana, ny mpanjono madinika dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fiantohana ny fitantanana tompon'andraikitra sy ny fampiasana maharitra ny jono an-dranomasina sy ny tontolo iainana, indrindra manoloana ny loza ateraky ny fiveloman'ny jono madinika amin'ny alalan'ny trawl. Ny fametrahana, fanitarana ary fanamafisana ny faritra nasionaly an-dranomasina (IEZ) ho an'ny mpanjono madinika izay voarara ny fanondranana an-dranomandry any ambany dia ho fototry ny fiveloman'ny olona an-tapitrisany izay miantehitra amin'ity sehatra tsy dia kely ity.
Blue Ventures no mampiantrano ny Transform Bottom Trawling Coalition mba hamolavola vahaolana ara-politika mitombina sy mifototra amin'ny porofo hanalefahana ny fiantraikan'ny trawling ambany. Anisan’izany ny fampandrosoana ara-teknika fanazavana momba ny fikarohana ary mampitambatra ny fomba fijery mba hamantarana ny lalana mankany amin'ny fomba fanjonoana ambany fiantraikany.
Miantso ireo mpanapa-kevitra ny fiaraha-mitantana mba handray sy hampihatra ny tolo-kevitra voarakitra ao amin'ny tatitra, izay ahitana hetsika sivy avo lenta hanovana ny trawling ambany mba hanarenana ny jono amoron-dranomasina sy hiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina. Tena zava-dehibe tokoa ireo hetsika ireo mba hahazoana antoka fa ny firenena amoron-tsiraka rehetra no miatrika maika ny trawling ambany, taorian'ny fitarihan'ireo firenena toa an'i Belize, izay nandrara ny fandrarana ny trawling ambanin'ny rano tamin'ny taona 2010, ary i Madagasikara, izay nandrara ny fanjonoana ambany indrindra amin'ny fanjonoana. ao anatin'ny roa kilaometatra amin'ny morontsiraka.
Vakio ny tatitra feno sy ny soso-kevitra Eto.
Fantaro bebe kokoa momba ny fiantraikan'ny trawling ambany momba ny fiovan'ny toetr'andro.
Vakio ny sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena tantara momba ny jono.
Mandrenesa avy amin'ny tontonana manam-pahaizana miresaka trawling ambany sy hoavy tsy misy harato at ny hetsika COP26 any Glasgow.
trawling ambany, fiaraha-mitantana, Report, mpanjono madinika, Manova trondro ambany, trawling